Amisom Oo Madaafiic Xoogan Ku Garaaceysa Magaalada Muqdisho Qeyb Kamid Ah.
Ciidamadda Midowga Afrika ee Amisom oo dagaalo saf balaaran leh kula jira Xoogaga Xarakada Al Shabaab ayaa waxay maanta ay madaafiic culus ku garaacayaan deegaanada ay Shabaab kaga sugan yihiin magaaladda Muqdisho.
Ciidamadda Amisom ayaa waxay hubka cul culus ay maanta ku rakibteen Taliska Amisom ee Xalane, Bandgigii Dhexe ee Ganacsiga, Hotel Jubba iyo Aqalka Madaxtooyada ee Villa Somalia, isla-markaana waxay madaafiic aad u ba’an ay ku asqeynayaan deegaanada ay Shabaab kaga sugan yihiin degmooyinka kale ee Muqdisho.
Dagaalada qaraar ee maanta ka soconaaya magaaladda Muqdisho ayaa waxaa hareer socda madaafiic aad u culus, kuwaa oo si weyn u ruxaaya qeybaha kala duwan ee magaaladda caasimadda ah ee Muqdisho.
Shacabka reer Muqdisho ayaa waxay shaki xoog leh ay ka muujinayaan dagaalada culus ee maanta ka soconaaya magaaladda Muqdisho, iyo sida ay maanta tahay xaaladda Caasimadii dalka Soomaaliya ee Muqdisho.
Dagaalada xargaha goystay ee maanta ka soconaaya magaaladda Muqdisho ayaa waxaa si weyn u hadal-haaya shacabka reer Muqdisho, waxayna inta badan ay shacabku taageersan yihiin in aan dagaal dhicin oo gebi ahaanba la iska daayo Qoriga la isku dilayo mudada 21 sano ah.
Shaqaale ka tirsan Shirkada Hormuud oo Muqdisho lagu toogtay!
Koox dil ka geystay Muqdisho oo mid kamid ah gacanta lagu dhigay
Yaa ka danbeeya Dilalka Muqdisho Shaqaalaha Shirkadda Hormuud loogu geesto Xog! Visits: 2
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo loo qeybin doono laalush ,XOG CULUS! Visits: 12
Burco: Xafladaha ragga iyo dumarka oo la mamnuucay !! Visits: 15
Dhaq-dhaqaaqyo Ciidan oo ka socda Beledweyne!! Visits: 33